XOG: M/weyne Deni oo qaadaya tallaabo aan farxad gelin Farmajo, qorshihiisa musharaxnimo & safarkiisa Baydhabo, Kismaayo ilaa Nairobi.
June 30, 2021 Xuseen 15
Puntlandtimes (Muqdisho)-Madaxweynaha dowladdda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa socdaal ku tegi doona Magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo iyo Nairobi todobaadkaan, kadib xiritaanka shirkii doorashooyinka ee Muqdisho.
Inkastoo aysan weli madaxtooyadu war rasmi ah ka soo saarin booqashada madaxweynaha Puntland ee magaalooyinkaasi haddana wararka qaar ayaa sheegaya in socdaalkiisu xiriir la lee yahay doorashooyinka guud ee Soomaaliya.
Hadal haynta qaar ayaa la xiriirta in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni damacsan yahay inuu isku sharaxo madaxweynaha Soomaaliya doorashada 2021, si lamid ah madaxweynihii hore ee Puntland AUN Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo October 10-keedii 2004 noqday madaxweynaha dowladdii kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya.
Falanqeeyayaasha siyaasadda Soomaaliya ayaa rumaysan in haddii uu Deni is sharaxo ay saamayn xooggan ku yeelan doonto qorshaha musharaxnimo ee madaxweyne Farmaajo maadaama ay labadoodu isku xarig ka yihin hanaanka awood qaybsiga siyaasadeed ee Soomaalidu xilligaan wax ku qaybsato.
Madaxweyne Deni ayaa haddii arrintaani rumowdo taageero ka haysta dowladda Imaaraadka Carabta oo doonaysa inay loolan la gasho wadanka Qadar oo gacan saar dhow laleh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
BOQOR SACIID DENNI waa soo dhowaynaynaa.. SACIID DENNI waa wiil masali kara DAAROOD ISMAACIIL JABARTE. SACIID DENNI waa wiil wax la qaybsan kara HAWIYE.
Soo dhowow waa hadii ay run tahay..
jajuusyadu waa cadadood iney soo qaataan magacyada gobolada oo dhan waxey la mid noqonayaan beeney waa run. ogow waa shaqsi
SOOMAALIYEEEY, maantay waxaa sama-bixin kara SOOMAALI WEYN labo madaxweyni. Madaxweyni ka soo jeeda MUDULOOOD ama MAJEERTEEN..
WAAYO???? waxeey yaqaaneen, sida wax loo maamulo. Sida SOOMAALI WEYN nabad loogu maamulo.. iyo waliba sida looga deggo kursiga markii laga adkaado xagga codaynta.
WAR BEEN MAA SHEEGAY…..
Tigreegii baa soo laabtay miyaa RAJO GALISAY??
War ayagaa gacmo ku gabad ah!!
Jawaankaas xaarku ka buuxo oo Garoowe maamuli Kari la’ cidda Soomaali hoggaankeeda udhiibaysaa ma dad waalanbaa?
Waa runtaa barawani
somali been badanaa mudulood iyo majeerteen somalia waxeey soo xukumeen 8 sano ka badan wax eey siyaasada somalia ku soo kordhiyeen oo aan fashil aheen malaha, no more M&M.
@Sitaha “Somali Galbeed”,
Marka hore BARAWANI KING waa nin dhanka aabbe Saldanada Baraawe kasoojeeda, dhanka hooyona Boqortooyada Majerteeniya kasoojeeda; labo quwadood oo Soomaalida, Geeska Afrika, iyo adduunyadaba facweyn kuleh ayay dhalashiidu salka kuhaysaa oo mana kalaxigo. Waxba Majeerteenka aad cuqdadda uqabto isaga ha ugusooxooqan ee toos u abbaar.
Taariikhda aydin sidaxun uga beensheegtaanna ma aha wax la idiin kaga dabaharayo ee kutalagala. Beenta uguweyn waa midda aad kuhadaaqday ee ah Majeerteen baa rag ONLF ah Itoobiya udhiibay. Raggaasu waxa ay ahaayeenba waxaa dalbaday in gacanta loosoogeliyo madaxweynihii Ogaadeen ee xilligaas talada Kililka hayay (Iley); dalabkuna mid dhaqan ah ma ahaynee mid siyaasadeed oo heer dawli ah la isuweydaarsaday ayuu ahaa, Dawladda Puntlandna sina uga may diidi kartaan inay dalabkaas u oofiso.
Xaqiiqada meeshan taalla waxay tahay in NIMAN OGAADEEN AHAA MADAXWEYNE OGAADEEN AHAA gacmahiisa lagusimay, taasuna ceeb iyo dembi toona kuma ahayn Puntland iyo Majeerteen midna. Sina umadhici karteen inay Puntland rag Ogaadeen ah oo tolkood ah Amxaaro mise Tigrey toos ugu gacangeliso. Dacaayadda rakhiiska ah waa la idiin dhaamaa maandhooyin.
Beenta labaad waa middaa aad Seyyidka ugu halqabsatay: Seyyidka haddii uusan taageero iyo taakuleyn buuxa Majeerteenka kahelin xarakadiisu way dhicisoobi lahayd xaqiiqdii. Wixii markii dambe isaga iyo Boqorradii Majeerteen dhexmaray oo kaladilay Allaahu Aclam, laakiin shacabka Majeerteen kaalintii uguweynayd ayay jihaadkiisii kagajireen sida lahubo.
Xisaabtaasna ku darsada in inta naf Majeerteen Seyyidka gacantiisa kumaqan aan Soomaalida inteeda kale weli lagumaqlin; haddana abid lamahayo meel ay Majeerteenku Ogaadeenka qisaas uguqaadeen amase ay kuhadalhayaan, sababtoo ah waa xaajo “kugu dhimay oo kaa dhimay” noqotay iyo nin tolkiisa kuceeboobay.
Beenta, borobagaanka iyo tolkan iskudirkooda joojiya waayo waa xaaraan aan aakhiradiina uwanaagsanayn ee aydinaan waxba kadheefi doonin.
Kkkk War bixin qaab daran,been wax aan jirin.
@Awlal goomuu magaca Mejeerteen noqday ceeb oo Barawaani la iska dhigo ama la sheegto?Barwaani King waa nin Majeerteen ah waana ceeb qofku inuu sheegto beel kale waligii Cismaan Maxamud buu ahaa.
Midda kale kkk oo Majeerteen maxaa hankii ka qaaday?Maxaa u diidaya Deni in uu isa soo sharaxo?Ma awal buu Farmaajo asxaan isu hayeen?
Illahay baad been u sheegtay hadaad tiri Majeerteen Ogaadeen yma dhiibin Amxaaro Somaliland Puntland baa kaga horeysay wey duubaan tahay Faroole oo leh afkaa naga dhaxeeya.
Sidoo kale halgankii Sayidka bal noo sheeg marka ay caawiyeen?Balse jaajuusiin bay ahaayeen Majeerteen waligoodna sidaas Bay ahaayeen ceebtoodana ma ahan waaba ku faanaan.
Intiina xun baa badan.Shaki kuna jiro dad fiican in ay idinku jiraan.
Deni yaa dooranaya oo wax ku falay. Puntland baa ku khasaartay
Saaxiib, cimrigaa aad joogto haddiiba uu hadalkan kaasooyeeray: “Sidoo kale halgankii Sayidka bal noo sheeg marka ay caawiyeen?, waa ayaandarro aad uweyn oo kuhaysata runtii.
Waxba yaanan meesha kugukashifinee, saldhiggii Seyyidka iyo Daraawiishtu ma Garbahaaray ayuu ahaa mise Eyl? Eyl se sow deegaan Majeerteen ma aha? Weligaa maad maqal miyaa taariikhda Qalcadda Daawad looyaqanno ee macruufka ah ee Eyl kutaalla?
Miyaadse maqlin xauuqii naxdinta badnaa ee Ilig Daldala ee uu Seyyidku kucaanbaxay? Mise inay niman Majeerteen ahaa Daraawiishta hoggaamiyeyaal sare ka ahaayeen? Waa taariikh sugan oo buugaag badanna lagaqoray ee aanan halkan kusookoobi karin, adigu Google iyo Wikipediaha gal oo iskaa ugusoo kaaftoon.
Seyydika hiiladii Bah-Majeerteenka ayuu Rabbi kufakiyay ee lama arkeen, waana xaqiiqo lama inkiraan ah.
ALA QOLKAAN MAXAA CUQDAD IYO KUWO CALOOSHA TIMO KU LEH KA BUUXAAN.
MAJEERTEEN MAJEERTEEN MAJEERTEEN
XAGGEE UGA BAXSANEYSAAN DUNIDANA CUQDADOODA AYAAD KU DHAMEYSANEYSAAN SIDA AABAYAASHIINBA UGU DHINTEEN.
AAKHIRANA SIDAAN MAQLAY LAANGAABKU WAA EHELU NAAR WAAYO LAANGAAB WAA XAASID, XASADKUNA WAXUU KAA CUNAYAA CAMALKAAGI WANAAGSANAA SIDA SALAADDA IYO SADAQADA
MAJEERTEEN IYO REER PUNTLAND CIDINA KUMA MASHQUULSANA EE MAAD DANAHIINA KA RAACATAAN YAA CAYAYAAN SHURUNSHUUR.
Siciid Deni ma aha markii ugu horreeysay ee uu isa sharaxo. Tan kale, waa laga yaabaa in xildhibaanno Majeerteen codka siiyaan Farmaajo laakiin uma badna in Mareexaan cod siiyaan Deni. Marka, Soomaalida kale codkeeda ayaa lagu kala baxayaa; nin walba nasiibkiis. Rajo weyn ayaan ka qabaa in haddii Deni is-sharaxo uu guuleysto. Farmaajo waa la nacay, haddii uu laaluush kusoo baxana waxaa halis loogu jiraa in dagaal sokeeye oo Xamar ka bilowda qarxo.
Haddii Deni is-sharaxo waa madaxweynaha Puntland loo caleemasaaraa Cabdi Faarax Juxa oo ah ninka qura ee aan aamminsanahay inuu beddeli karo Deni.
Ustaad Awlal baa kuu jawaabay, waxaanse ku darayaa markii daraawiish ciririiri la galiyey, wuxuu ahaa boqor Cismaan kii Sayid Maxamed ku yiri,’Usoo guur Bari, dad cadaabeed waxaa laga galaa dal cadaabeede’. Markii dambe Talyaaniga ayaa hanjabaad iyo cadaadis ku saaray Boqor Cismaan inuu ballantaa ka baxo.
Tan kale, Suldaan Cali Yuusuf waxaa loogu masaafuriyey Eriteria markii uu diiday in ciidan Ingiriis oo Daraawiish dhabarjebiya kasoo dego Hobyo iyo dhulkii kale ee uu ka talinayey.
Adiga sow ahid maanta oo la joogo qarnigii 21aad ninka isagoo ah mdaxweyne qaranka Soomaaliyeed –dhiibay Qalbidhagax isla markaana ONLF u aqoonsaday argagixisada si uu Abiy ugu raalligaliyo?
Wakhtigii warlordyaada waxa uu mareykanku ka dalbaday Muse Yalexow iyo warlordyaashi kale in ay usoo qabqabtaan argagaxisada. Waxaa mareykanka loo soo qabqabtay boqolaal nin oo ah Oggaadeen. somaliland iyo Galmudug ayaguna waxay xabashida u dhoofiyeen tiro badan oo ah ogaadeen. Farmaajo ayaa u dambeeyey oo waa asagii QalbiDhagax dhiibey. Puntland waxay dhiibtey labo nin oo ah ogaadeen. Ficilkaas puntland oo dhacay dowr iyo Toban sano ka hor wali waa laga sharqaminayaa. Ficiladii ay qaadeen cidihii kale lama soo qaado. Taasu waxay daliil u tahay in ficilada puntland aad loo qaymeeyo. Cidii qayma leh ayaa ficilkoodu qayma Leeyahay.
Sayid maxamed ma waareen wakhtigaas dheer hadii uusan haysan garabka bulshaweynta majeerteen. Garabsiintaas waxuu ka qaaday kibir iyo islaweyni oo waa isagii xasuuqa ba’naa ku bilaabay majeerteen. Qoys majeerteen ah oo uu sayidku wax ka dilin maba jidho. Markii uu lumiyey garabkii majeerteen waa isagii hal maalin ah ingiris ku durduriyey. Maalinkaas waxuu sayidku haystey 60,000 oo ciidan ah laakiin wey kala firdhadeen markii ay cirka ku arkeen sadex shimbirood oo qiic iyo qaylo afka kasii deynaya. Aakhirkii waxay noqotay in majeerteenkii uu laynayey ay hareerihiisa kusoo haraan oo aaseen markii tii Alle u timid. Waxa uu sayidku ku baroortay “anaa didiyoo dalkii ka eryee halkee daarood u doonaa” ” anaa didiyoo dalkii ka eryee halkee muslim ugu dugaalaa”
Dhacdadii canjeel talwaa waxaa lagu xasuuqay boqolaal majeerteen ah laakiin hanqaraarac uma dhutiyo lug go’day. Inkastoo xasuuqaas arxan darada ah loo geystey majeerteen laakin kamaysan daba calaacalin markii uu qabriga galay sababtoo ah waxay eegayeen faiidada weyn ee ka dhalatay halgankiisii.
Kaadh gubtay kalsooni looma hayo.